"हामीले ‘जनमत संग्रह’ को एजेण्डा छोडेका छैनौँ" :-डा. सिके राउत – Mid Nepal News - मध्य नेपाल खबर - Mid Nepal News - मध्य नेपाल खबर
“हामीले ‘जनमत संग्रह’ को एजेण्डा छोडेका छैनौँ” :-डा. सिके राउत
Mid Nepal News, १२ माघ २०७६, आईतवार ०२:५९
माघ १२ -जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले अहिले पनि पार्टीको मुख्य एजेण्डा ‘जनमत संग्रह’ नै रहेको बताएका छन् । जनकपुरधामको रंगभूमि मैदानमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारसँग सम्झौता गरे पनि ‘जनमत संग्रह’को मुद्दा नत्यागेको दावी गरेका हुन् ।उनले भने, ‘अबकी माग, जनमत संग्रहका ऐलान’ उनको भनाई थियो । डा. राउतले सरकारसँगको सम्झौताले विजयी हासिल भएको भन्दै यसलाई कसैले गलत अर्थ नलगाउन् भनेर चेतावनीसमेत दिए । उनले आफुहरुले दलाल पार्टीहरूको जस्तो लेनदेन गरी सम्झौता नगरेको दावी गरे ।
‘मधेशवादी पार्टीहरूले चुनावका बेला ओलीलाई भोट नदिनु भनेका थिए’ डा. राउतले भने, ‘तर जनताबाट पाएको मत उही केपी ओलीको शरणमा लगेर बुझाए । यसवाट पनि उनीहरु दलाल हो भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।’उनले समाजवादी पार्टी पूर्वनेकपा नेताहरूको भएको उनीहरुलाई दलालको दर्जामा राखे । ‘उपेन्द्र यादव र अशोक राइ पूर्वएमाले हुन् उनीहरु अझै पनि मधेसीलाई धोका दिन सक्छन् सत्तामा जानु बाहेकर अन्य भिजन छैन उनीहरुसंग ।’